musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Volcano Advisory yakaburitswa muHawaii
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hawaii Kupwanya Nhau • Kamaainas • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kudengenyeka kwenyika kunodarika zana nemakumi mana kwakapururudza kuburikidza neBig Island yeHawaii kubva nezuro manheru, Muvhuro, Nyamavhuvhu 140, 23. Vazhinji vaive pasi pehukuru 2021 neimwe pa1.
Uku kudengenyeka kudiki nekudengenyeka kwave kuri kuenderera pamwero weinosvika gumi kudengenyeka paawa, chikonzero chakaringana kuburitsa kuraira.
Hawai'i Volcano Observatory iri kuvhara kuongorora chiitiko kuKuuea crater uko kuri kuitika kudengenyeka kwenyika.
Kugadziridza kwezuva nezuva kuchapihwa neHawai'i Volcano Observatory kudzamara kuziviswa.
Iyi Hawai'i Volcano Observatory pa Hawai'i Volcanoes National Park iri kutarisa chiitiko ichi uye ichipa yambiro nekuchenjerera kuti Kilauea crater haisi kuputika. HVO inoenderera ichinyatso tarisa kudengenyeka kwaKilauea, deformation, uye gasi kuburitsa chero shanduko mune chiitiko.
Sekunyora uku, hapana humbowo hwedutu pamusoro peKilauea crater, zvisinei, pakanga paine shanduko mukushomeka kwepasi kumatiltmeters mudunhu reKuuea. Izvi zvinogona kuratidza kuti magma iri kubika 0.6 kusvika 1.2 mamaira pazasi pecaldera uye ichienda kuchamhembe kwechikamu checrater.
Hasha dzaPele - Mwarikadzi wemakomo anoputika
Chero ani anobva kuHawaii achakuudza kuti kuputika kwemakomo muzvitsuwa iri meseji kubva kuna Pele, diety mungano dzeHawaii. Ndiye mwarikadzi wemoto, mheni, mhepo, kutamba, uye makomo.
Pele ane hunhu hwakanyanya uye husingafungidzirwe hunopfekedzwa nehukasha hwechisimba, zvichiita kuti hasha dzake dzizivikanwe nenzira yemakomo anoputika. Akaparadza madhorobha nemasango semvura inoyerera ichibva mumakomo ichienda kugungwa.
Nhoroondo yacho ndeyekuti anorarama muHalemaumau crater pamusangano weKilauea, imwe yemakomo anoputika zvikuru pasi rose.
Pele anogara achiratidzwa semunhu anodzungaira uye kumuona kwave kuchitaurwa muketani yechitsuwa kwemazana emakore, asi kunyanya padyo nemakomo anoputika uye padyo nepamba pake peKilauea. Mumaonero aya, anoratidzika kunge anga ari mukadzi murefu akanaka kwazvo kana mukadzi asingakwezve uye asina kusimba muchembere anowanzo kuperekedzwa nembwa chena. Nhoroondo inoti Pele anotora iyi fomu yemukadzi akwegura anopemha kuyedza vanhu - achivabvunza kana vaine chikafu kana chinwiwa kuti vagovane. Avo vane rupo uye vanogovana naye vanopihwa mubairo, nepo chero munhu anokara kana asina mutsa achirangwa nedzimba dzavo kana zvimwe zvinhu zvinokosha zvakaparadzwa.
Vashanyi kuHawaii vangangonzwa nezvekuti Pele achatuka chero munhu anobvisa mabwe kubva kumba kwechitsuwa chake. Kusvikira nhasi, zviuru zvezvimedu zvedombo remabota zvinotumirwa kuHawaii kubva kune vafambi pasirese vanoomerera kuti vakatambura rombo rakaipa uye nhamo semhedzisiro yekutora matombo evhavha kuenda kumba.
Hawai'i Volcano Observatory ichaburitsa zvinyorwa zvezuva nezuva zveKaueuea kusvikira zvaziviswa.